Forum serasera malagasy Soka-dranomasina (FANO) - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Soka-dranomasina (FANO)
RATOVOARY - 31/07/2009 10:15
Sao dia misy mahay ny fikarakarana azy fa bdb henan'ireny zao ao @ Bazary ao. Zah mba te hanandrana fa tsy sahy sao mila fikarakarana manokana.
Mba omeo sopapa e!
xxx - 31/07/2009 10:29
Toro-hevitra ho anao:
-Aza mividy an'ireny .Tsy tsara ny mihinana azy ireny.
- fanimbana ny natiora eto @ firenentsika ny fihinanana azy ireny.
-Raha hanao toa anao avokoa ny olona dia ho lany taringana ny fano izay espece en danger eto M/car.
Ilazao ny havana,ny namana sy tapaka mba tsy hitsinjo ny zava-boahary.
ni81 - 31/07/2009 11:20
Citation Toro-hevitra ho anao:
rakapy - 31/07/2009 15:06
Marina be mihintsy izany ry xxx.
Tratra indray ianao Ratovoary." Aza mandrora matsilany ,ny mamono biby vale" hoy Dedesa izay.
Avelao asiso eo ny henam-panon-dry zalahy amin'izay izy tsy hangalangala fahatany fano intsony.
RATOVOARY - 31/07/2009 15:47
Citation Tratra indray ianao Ratovoary
:-D :-D Ka le izy anie rakapy ka tena lazain'dry zalah fa milay e! Zah aloha hatr@zao mbola tsy nihinana e! fa mba saika hanandrana aho. Nefa toa vao miainga dia bedy. Aoka ihany kah
Misaotra @ toro-marika e! Hanaja dia hanentana ny hanajàna azy.
rakapy - 31/07/2009 16:01
Izany koa no mba reko hoe milay hono fa malany :-D :-D :-D
Amiko aloha ny manandrana mety tsy mahadiso,indrindra raha efa misy voakarakara eo, fa ilay hoe atao ohatra ny fihinana akoho sy omby kosa dia mety ho lany taranaka ry zalahy ko.
Misaotra @ fahatongavana saina satria izay no olona takian'ity firenen-tsika ity.
RATOVOARY - 31/07/2009 16:07
Vao haingana no nisy documentaire tao @ TVM t@ alalan'ny TV5 monde afrique mikasika ireo chasseurs de tortue ireo, ry zareo vezo no tena manao asa fivelomana ny fivarotana ny henan'izy io.
rakapy - 31/07/2009 16:19
Iny @ faritry Itampolo, Beheloka, Androka, lavanono, faux cap iny moa dia 50.000fmg na 75.000 dia mahazo iray glady be. Fa ilay famonan-dry zalahy azy no tena mampalahelo.
Ny fano mantsy biby tsotra sady malefaka no tsy manana defense firy. Avadiky ry zalahy ilay fano dia tapahin-dry lerony ny lohany dia avy eo kapaina @ famaky ilay karapasy mampitambatra ny ambony @ ambany iny. Dia avy eo loharan-dry zalahy @ izay ny ao anatiny....
Mampalahelo ny mijery ilay biby.
Izay no nahatonga ahy tsy mba nanandrana azy io, vokatry ny alehelo.
Ratoa - 31/07/2009 20:46
Ka na biby inona na biby inona, ampijaly aloha vao hanina. Ianao ve mino fa tsy mijaly ny akoha ataon-tsika laoka? Ny zandriko tsy mba nety nihinana akoho fony kely fa niompy akoha vitsivitsy ny reninay ka mividay aza i raneny dia tsy nety razandry fa nandraiky narary. Ny cousin-ko koa tsy mba nety nihinana trondro fony kely fa "ianareo mampijaly biby hoy izy". Dia natao baolina ny trondra dia nihina izy . Inona angaha izany raneny? trondro hoy raneny. Tsy marina izany hiy bandy kely. Tsy ohatry izao mihitsy ny endriky ny trondro.
Ka raha isika izay efa tonga saina, nianatra, manana anto-pivelomana no mihaza fano dia disoa be. Fa raha olona tsy manana inoninona no momono azy mba hihinana dia tsy misy fahadisoana izany amiko: Voky aloha Rakoto vao mihinana ny biby. Ary ny olombelona dia efa natao hanao izany : mihinana sy mamono izay ilaina ahavelona fa tsy mandripaka tsy aman'antony.
Ary mora dia mora no ivarotany azy fa tsy mitady anambaka na ny hanan-karena ny mpivatra sy mpihaza: Mihinana aho ary efa nihina fano fumé na séché (tsara), fa ny frais aho mbola tsy nihinana.
fa raha ry Japs izay mitondra sambo be, misambotra sokatra aman-jatony no mivarotra azy dia tsy mividy aho.
Fanoharana: fony aho mbola nianatra dia mbola nahery be ny apartheid. Ny voasary avy any Afrique du Sud tsara sy mora. Tonaga saina aho indray andro: "andray ity zaho ka dia mividy voasarin'ny raciste". Dia hoy indray ny eritreritra iray: mpikarama no namboly itony fa tsy ny raciste na dia zy aza ny moyens de production ehetra. Raha mijanona tsay mividy izao tontolo izao kamanao boycott, dia tsy ho very ilay fihinana kely ny madinika, tsy hinan-kanina ny fianakaviany.
Mitadiava recette amin'ny internet. Ny soupe de tortue malaza be sahal aamin'ny soupe d'aile de requin
booboo - 31/07/2009 22:44
Biby isan'ny voaharo satria atahorana mafy ho lany tamingana ireny no antony tsy tokony hihinana azy intsony, sy tsy tokony " hihazana " azy intsony koa.
Tsy ohatra ny voasary tsy ho lany tamingana ...
Ratoa - 01/08/2009 15:52
Ka na atahorana ho lany aza ka tsy mihaza mandripaka ny olona fa izay ilaina androany ihany no alainy dia tsy mandripaka izy, indrindra raha ny biby efa antitra tsy hiteraka intsony no hazainy. Ny mihinana ny atody sy ny biby tanora mbola miteraka no tena sompatra.
Ny trondro-dranomasina manamorona an'i Afrique de l'Ouest rehetra (côte Atlantique) dia atahorana ho ripaka noh'on'ny ataon'ny Japs sy ny eropeana manana licence de péche, alainy hatramin'ny zana-trondro anefa misy calibrage lazaina fa hajainy anefa izy tsy manaja akory. Dia ny vahoaka madinika izay tsy mana-ko hanina sy tsy ampy fitaovana ve tsy raràna tsy hanjono intsony? Anefa hazan-drano no foto-tsakafony, tahaka ny any amorontsiraka any amintsika?
Ny Japs sy ny eropeana no raràna fa tsy ny vahoaka madinika izay manjono yrondro folo raha be indrindra.
Toa izany koa ny sokatra. Rehefa tsy hazaina ny atody, sy zanany madinika, ny renitsikatra mbola afaka manatody dia tsy ho lany taranaka izy satria ny antitra tsymaintsy ho faty. Ka raha mahasoa ny ory, nahoana?
soanja - 12/09/2009 10:00
Ka izay indrindra mantsy Ry Ratoa fa matoa fa lazaina fa ho lany tamingana ilay izy dia efa nisy tokoa ny fianarana manokana ilay biby sy nahoana izy no tsy hitovy amin'ny biby hafa. Andraso fa raha malalaka aho dia alefako eto ny doc mikasika ny soka-dranomasina fa satria ireny tsinona amin'ny fasika no manatody ka ndeha hanatody izy misy mpihaza, izay mba mahavita mandatsaka amin'ny fotoana mahamety izany ihany dia afaka manatody nefa ny atody misy mpihinana foana koa (biby io matetika) satria tsy voatototra tsara moa ilay reny lasa fa tsy mijanona eo. Ary farany ilay sokakely mahafatifaty be dia be tsy tody lavitra akory ry zareo rehefa foy dia ny 10% tamin'izay foy teo no tody any anaty ranomasimbe fa ny ambiny tsenain'ny trondro hafa. Koa raha ampiana ny asa ratsintsika olombelona dia ho fongana tokoa izy ireo.
Misaotra indrindra an'i xxx sy ny hafa miasa mafy hitandrovana ny voary ho lavorary. Misaotra koa ny namana Ratoavoary.
Ratoa - 13/09/2009 02:05
efa fantatro daholo ireo lazainao ireo. Tsy takatrao ny hevitra ambarako. Tsy maninona. Tsy ny fihinanan'ny mahantra azy no mahalany tamingana azy satria ny sokatra lehibe iray dia maharitra amam-bolana ny fihinanany azy. Ary biby iray hatrany no hazainy.
Ny haza lambo ataon'ny mpanondrana no maha lany tamingana azy. Hoy ilay hira hoe:
"resak'adala ny amin'ny rano sy ala
ho an'ny tsy misy drala"
"voky aloha Rakoto vao mihinana ny biby"
dia ampiako hoe: velona aloha Rakoto vao velona ny biby.
soanja - 14/09/2009 18:58
Rehefa tsy hazaina ny atody, sy zanany madinika, ny renitsikatra mbola afaka manatody dia tsy ho lany taranaka izy satria ny antitra tsymaintsy ho faty.
Raha fantatrao ny nolazaiko dia tsy nanoratra an'ito ianao.
Misy mpihaza tokoa na dia ireo reny handeha hanatody aza. Toerana isany nahabe ahy i Ampasindava ary ny tenako dia zanaka mpanjono. Eto aho dia hilaza aminao fa tsy mahalala izay sokatra antitra sy tanora ireo mpihaza azy fa izay haza dia haza ary sakafo daholo no anarany rehefa izay.
Takatro tsara ny tianao hambara saingy hiteny kosa aho hoe inona moa no atao hoe Fanabeazana ny olom-pirenena ho vanona? Io dia miatomboka lalandava amin'ny tsirairay. Tsy hiandry hoe rehefa milamina ny ao anaty governemanta sy tsy hihinam-bola sy hanao rapandango ny fanjakana sy ny mpifandraraha aminy vao tsy hanao tsolotra intsony aho mahantra kely na olontsotra kely aty lavitra aty.
Ny tiako tenenina dia mila miatomboka lalanadava amin'ny faran'izay madinika ny fanabeazana ny fikoloana sy fitandrovana ny zavaboary ; tsy misy hoe ry zareo aty sy ary fa dia isika rehetra miara mientana ary mihatra amintsika rehetra ny lalana manankery raha misy. Manantena koa ANEFA isika fa manana fanjakana manohana antsika amin'izany ezaka atao izany.
Raha ny olona eny amoron-dranomasina dia tsy ho lany sakafo satria betsaka ny trondro sarotra lany any fa izay lazaina kosa fa ho lany taranaka dia mba mila mampiasa saina isika hitsonjo ny ho avin'ny rehetra. Ataoko fa goavana tokoa ny atao hoe Lamboara na lamboaragna ary io no sakafo isan'ny nalaza tamin'izay fotoan'androny. Firy izao no isany ao anaty ranomasimbe ao??? Lany tamingana tokoa izy ireo ary raha misy dia azo isaina amin'ny tanana raha ny faritra misy antsika ao Madagasikara....
Tsy izay mihira sy mpanakanto hidradradradra resaka politika akory no manana ny fahamarinana fa ireo izay niaina sy mahatsapa ny hahasarobidin'ny zavaboary satria hita fa na ny taranaka efa misy izao aza efa mijaly noho ny fahaosan'io zavatsoa io.
Ratoa - 14/09/2009 21:03
marina fa ilaina anarina daholo ny tsirairay. Ny sakatra aloha no hita fa miha vitsy eto atsimon'i Madagaikara. Any avaratra indray dia ny trondro no mihena ary ny tany ambolena voaray anaty ala voafaritra (forét protégée) satria nitatra ny ala. Vokany: afindra ny mponina. Alana amin'ny tanàna nahabe, alana amin'ny tanindrazany. Fantatrao ve ny lanjan'ny tanindrazana amin'ny malagasy? tsisy fampianarana. Tsisy inoninona. Fa nahoana izy raha ampianarina dia avela eo ihany?
Toa izay koa ny sokatra: nahoana izy raha ampianarina? Misy signes extérieurs ahafantarana ny lahy sy ny vavy, ny antitra sy ny tanora. Fantatrao ve fa ny trondro dia mivezivezy ka misy fotoana tsy misy izy ireny? Mandeha lavitra be na lalina be vao mahita. Misy fotoana eo amorony eo daholo ny karazany rehetra?
Rehefa tsy misy dia tsy misy. Rehefa noana dia noana.
Na biby na olombelona dia ny "instinct de survie" no mibaiko ny hetsika rehetra. Ny olombelona tsotra no lazaiko fa tsy ny "braconniers".
Fantatrao ve fa ny requins koa mihena eran'izao tontolo izao ? Anefa misy tany, io no hany trondro lehibe azony hazaina amin'ny andro sasany ka mainina hitsinjovana ny andro tsy azo anjonona ; tsy mbola manana vaha olana ireo olona ireo. Dia inona no atao? avela ho faty noana eo izy ireo dia rarana hoe " aza manjono atsantsa"?
Fampianarana ireny vahoaka madinika maloto lamba sy noana ireny no tokiny ataonao tonga saina izany. fa ny olona tahaka ahy tsy azahoanao ninoninona satria tsy mpihinana ireny aho no tsy noana.
soanja - 14/09/2009 22:01
Raha miresaka eto ny tenakp aloha dia tsy ho an-dRatoa irery aloha fa ho an'ny Malagasy tsy vakivolo. Raha manafatrafatra an'i Ratovoary isika dia mba sady tsy hihinanany no hampitainy amin'ny rehetra ny hafatra arakizay vitany. Isaorana azy mialoha izany.
Raha ny fampianarana ny vahoaka momba ny tontolo iainana dia efa nataoko ary asako mandraka androany. Miara miasa amina projets be dia be izahay mandefa volontaires sy isany mpamatsy vola amin'ny fiarovana biodiversite ao an-dranomasina sy ny an-tanety. Koa tsy vaovao amiko ny zavatra resahinao ary ny fiarahamiasa dia sady ho an'ny mpianatra mianatra an'izany no koa ho anmin'ireo vahoaka any lavitra any. Tsy miara vita indray andro anefa ny ezaka saingy rehefa misy toy izao dia manararaotra ihany mampianatra izay tratra na dia tsy misy ifandraisana aza.
Ny tenako dia isan'ny nanbao education a l'environnement tamin'ny faritra Ranomafana ary nampianatra ny mponina manodidina ny ala izay mpihaza orana amin'ny fotoana ny ahoana ny tokony alaina izy ireo ary amin'ny fotoana ahoana no avela indray mba hiodina ny fiainany. Tsy resaka ambony latabatatra no resahiko anao eto fa tena arabakiteny tokoa. Isany asa natao tamin'izany ny fitadiavana vahaolna ny hiompina ireto orana ety an-tanana sns sns...
Koa asa izay mbola tsy nahavita ny anjarany aloha fa raha ny hoe aza hanina ny sokatra amidy eny an-tsena dia ny tenako no voalohany hilaza fa ie aza vidiana ary aza misahirana akory amin'ireo olona ireo. Efa manomboka ny fampianarana saingy isika olombelona tsy voatery mahazo fahalalana foana ka hanaraka antsakany sy andavany. Izay manam-pahendrena ihany no mahalala izay ataony!
Ratoa - 15/09/2009 23:27
Citation Raha fantatrao ny nolazaiko dia tsy nanoratra an'ito ianao.
"Aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianao"
Ny vali-teninao rehetra dia manambara fa tsy azonao sary an-tsaina mihitsy ny tiako ho lazaina. Ary ny tena "drame" dia arosonao eo anolohana ny tenanao.
soanja - 16/09/2009 01:52
Tsy manahy raha izay no fahitanao azy. Misaotra anao nanazava ny hevitra.
cutie - 18/09/2009 01:42
Citation Mpandefa : RATOVOARY [ Valio ] 31-07-2009 10:15:34
Lohateny : Soka-dranomasina (FANO)
mampa be zany sokatra hohanina zany :cry: :cry: :cry: :cry:
misy namanay zay nilaza tamiko we mitomany hono le sokatra refa hitany le antsy hamonoana azy :cry: :cry: :cry: :cry:
Ratoa - 19/09/2009 21:11
Citation mitomany hono le sokatra refa hitany le antsy hamonoana azy
dein koa!!! aiza koa no hisy izany!!!!